Trade Unions Training – CTUM
Published by ctum at November 24, 2019
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၄) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ လင်းဝင်း သစ်စက်မှ အလုပ်သမားများအား အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးရေးမှူး ဦးအောင်ဆန်းလင်းနှင့် ခုံသမာဓိကောင်စီအဖွဲ့ဝင် ဦးရဲကျော်သူတို့မှ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ အလုပ်သမား စုစုပေါင်း (၃၁) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် […]
Published by ctum at April 1, 2019
Basic Trade Union Training and Organizing
Basic Trade Union Training and Organizing 2019 Feb 24 (Sunday) 36 trade union members from Leader Carton Box Union attended the training. In Hlaingtharyar Township, Yangon […]
Published by ctum at March 15, 2019
ချားမင်းအထည်ချုပ်စက်ရုံ အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး
ချားမင်းအထည်ချုပ်စက်ရုံအခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏သွေးစည်းညီညွတ်မှုနှင့်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်(2)လတစ်ကြိမ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအားအဖွဲ့ဝင်(430)ဦးတတ်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ (English below) Crd: Thinzar Htet Solidarity Activity of Charming Garment Factory Union 24.2.2019, Yangon, Myanmar Charming garment factory union,amember union of Industrial Workers’ […]
Published by ctum at October 16, 2018
Trade union management and financial management training
Trade union management and financial management training for CTUM members in Sagaing. ၂၀၁၈ခုနှစ်၊သြဂုတ်လ(၁၃)ရက်၊ ကောင်းမှုတော်ကျောင်းတိုက်၊ အလုံ(မင်းဒေါင့်ရပ်)၊မုံရွာ၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ …..မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်(CTUM)၏ ကဏ္ဍအဖွဲ့ချုပ် တစ်ခုဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်သစ်လုပ်ငန်း အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်(BWFM)၏ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြ သော စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမှ […]